ချစ်ရေးချစ်ရာ Archives - Barnyar Barnyar
မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ…
May 26, 2022 thanzin laypyay 0
မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ… အချစ်ဆိုတာ… နှလုံးသားချင်း ဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ၊ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါနော်။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင် ထားရပြီးလား… ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော်…. (၁) သင့်ကို နားလည်မှု အပြည့်ပေးထားတယ်… ” […]
ကိုယ်ရဲ့ကြင်ယာဖက်အစစ်အမှန်ကို ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကနေ သိနိုင်တယ်နော်…
ကိုယ်ရဲ့ကြင်ယာဖက်အစစ်အမှန်ကို ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကနေ သိနိုင်တယ်နော်… ပျိုမေတို့အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားမျိုးမဟုတ်ဘဲ… ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားကို လေ့လာပါ။ ပျိုမေတို့အပေါ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံသလို ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရည်းစားတွေကိုလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထားခဲ့တယ်။ လက်ရှိမှာ ရည်းစားတွေကများနေပြီး ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်ရမှန်းမသိ […]
May 23, 2022 thanzin laypyay 0
အချစ်စစ်နဲ့ မတွေ့သေးတဲ့-မိန်းကလေးများ-ဖတ်ဖို့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကအများသောအားဖြင့် အချစ်ကံခေကြတာများပါတယ်… ။ သင်က-စိတ်ထားကောင်းတော့ သင်ချစ်တဲ့-သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတယ် ။ ဒါပေမယ့်… သူတို့ကကျတော့ သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရတာလဲ… ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဆိုးတဲ့ယောင်္ကျားတွေချည်းပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး… ။ သင့်ရဲ့ ဝေဒနာတွေ လျော့ပါးသက်သာဖို့အတွက် […]
ချစ်ပြီးမှ လမ်းမခွဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်…
May 21, 2022 thanzin laypyay 0
ချစ်ပြီးမှ လမ်းမခွဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်… ချစ်ပြီးမှ လမ်းခွဲစကား ပြောဖို့က တကယ်တော့ အားနာဖို့ကောင်းတယ် ။ တစ်ယောက်အကြောင်းလည်း တစ်ယောက် သိနေပြီ ။ တစ်ယောက် အားနည်းချက်ကိုလည်း မြင်ပြီးမှ အဲဒါကို နင်းပြီး လမ်းခွဲ လိုက်ကြတာ ဘယ်ကောင်းမလဲ။ တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်တဲ့သူတွေ ဆိုရင် […]
ဘ၀လက်တွဲဖော်ရှာတော့မယ်ဆို ဒီလိုလူမျိုး ဝေးဝေးရှောင်
ဘ၀လက်တွဲဖော်ရှာတော့မယ်ဆို ဒီလိုလူမျိုး ဝေးဝေးရှောင် 1. လင်မွဲ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် စီးပွားရေးအသိတရား မရှိဘူးဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရေမရှိတဲ့ အိုင်မှာ နေရတဲ့ငါးလိုပဲ ပူလောင်ခြောက်သွေ့လွန်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်… မွဲတဲ့ယောက်ျား မယူလေနဲ့။ 2, လင်နာ မင်္ဂလာဦးညကစလို့ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါကြီးသေးပေါင်းစုံ၊ ပိုးမွေးသလိုမွေးနေရမယ့် ကိုချူ ချာ၊ ကုလိုက်ရတဲ့ဆေး၊ […]
အိုင်တွေတိုင်း ခြေဆေးတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ လက်သုံးစကားများ (သို့) ဂျင်းကြီး ၁ဝ ပါး
May 19, 2022 linn htet 0
အိုင်တွေတိုင်း ခြေဆေးတတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ လက်သုံးစကားများ (သို့) ဂျင်းကြီး ၁ဝ ပါး ဗေဒင်မေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီ၁၀ခွန်းကို အမြဲတမ်းလိုလို ပြောနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာနေပါပြီ။ ၁။ အဲ့ကောင်မလေးက သူငယ်ချင်းပါကွာ… ဒီလိုစကားမျိုးဟာ သူကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်နေကြောင်း သင်ရှာဖွေတွေ့ ရှိသွားပြီး ဒါဘယ်သူလဲလို့ မေးမှသာ […]
အသက်၂၀ ဝန်းကျင် အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ..
May 19, 2022 thanzin laypyay 0
အသက်၂၀ ဝန်းကျင် အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အရာများ.. အသက်၂၀ အရွယ်ဆိုတာ မတည်ငြိမ်သေးတဲ့ အရွယ်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမှားအယွင်း မဖြစ်အောင် သတိထားဖို့ လိုပါတယ် ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် အသက်၂၀ အရွယ်မှာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အရာတချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝမရွေးချယ်သင့်တဲ့ မိန်းမ (၁၀) မျိုး
May 18, 2022 thanzin laypyay 0
လက်ထပ်ဖို့ လုံးဝမရွေးချယ်သင့်တဲ့ မိန်းမ (၁၀) မျိုး မိမိရဲ့ ဇနီးမယားအဖြစ် ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ မိန်းမ (၁၀)မျိုးကိုတော့ အထပ်ထပ်အခါခါ စဉ်းစားပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ၁။ ဒေါသကြီးတဲ့မိန်းမ အမြဲတမ်းလိုလို စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့ မိန်းမကို မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမိန်းမမျိုးကို ဇနီးအဖြစ် ရွေးချယ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ […]
May 15, 2022 thanzin laypyay 0
သင်ခန်းစာယူပါ ညီမလေး မင်းကောင်မလေးနဲ့ မင်း chatting ထိုင်နေတယ်။ ရုတ်တရက် သူနဲ့ ဆက်ဇ် chat လုပ်ချင်လာတယ်။ မင်း သူ့ဆီက ဖော်ချွတ်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို တောင်းတယ်။ ကောင်မလေးက မပေးဘူး ငြင်းတယ်။ မင်း ဆက်တောင်းတယ်။ ကောင်မလေးက သူ့ကို နားလည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ […]
လောကမှာ မျောက်ထီးနဲ့ တူသူက ပေါနေပြီး ခြင်ေသ့ထီးနဲ့ တူသူက ရှားတယ်
April 18, 2022 linn htet 0
လောကမှာ မျောက်ထီးနဲ့ တူသူက ပေါနေပြီး ခြင်ေသ့ထီးနဲ့ တူသူက ရှားတယ် တစ်ခါက လင်မယားနှစ်ယောက် တိရစ္ဆာန်ရုံ သွားကြတယ်။ မျောက်လှောင်အိမ် ရောက်တော့ မျောက်ထီးနဲ့ မျောက်မ ဆော့ကစားနေတာ မြင်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူက romantic ဆန်တာပဲနော်၊ မျောက်ထီးက အရမ်းချစ်တတ်တာပဲ ။ ယောက်ျားဖြစ်သူက ဘာမှ […]